Parkopedia neApple vanobatana nemauto kusimudzira ruzivo rweMepu | IPhone nhau
Apple yanga ichishanda nesimba munguva pfupi yadarika kuti iite Mepu yekushandisa kuti iwedzere kukosha, chimwe chinhu chatinoona chinoratidzwa mukuchinja kwazvino kwakaitwa kwachiri muIOS 10, uko kugadzirisa kuri pachena kubva panguva yekutanga yatinopinda mukushandisa. Huwandu hwevanhu vanoshandisa yazvino Mepu app muzuva ravo zuva nezuva iri kuwedzera, uye Apple inoda kuita kuti nhamba iyi irambe ichikura iine zvekuwedzera senge iyo yatinokuudza nhasi, iyo pasina mubvunzo inomiririra yakanaka kukurudzira kwayo.
Parkopedia ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa maficha kana zvasvika pakutsvaga mota mapaki uye nzvimbo dzekupaka mumaguta, kuva nemamiriyoni makumi mana enzvimbo dzekupaka dzakanyoreswa munzvimbo dzenyika makumi manomwe neshanu. Nhasi vazivisa kuti vane chibvumirano neApple kuti vatange kusanganisira ruzivo kubva kudhatabhesi yavo maererano nenzvimbo idzi dzekupaka mumakambani ekushandisa Mapu, zvinozotipa maonero akazara enzvimbo dzakanakisa kupaka mota yedu. Kunyangwe paine chokwadi chekuti kusvika parizvino pakange paine zvimwe zviratidzo mukati meapp izvo zvairatidza zvimwe nzvimbo dzekupaka, danho iri rinomiririra danho nyowani revashandisi, zvichirerutsa basa rinonetesa rekutsvaga nzvimbo yakanaka yekupaka.
Kunyangwe izvo zvatinoona muMapp app zvisiri kuzove zvese, kubvira isu tichakwanisa kuwana chaiwo maratidziro uye hunhu kuburikidza neParkopedia's pachayo mapuratifomu, pachavo
Vashandisi veApple Mepu vachakwanisa kuona ruzivo rwakakosha nezvekupaka nzvimbo uye nzvimbo dzakatenderedza pasirese. Uye zvakare, ivo vanozove nesarudzo yekuwana zvakananga iyo webhusaiti yeParkopedia kana iyo iOS app kuti vaone rumwe ruzivo rwakadzama senge mutengo, wongororo yemushandisi, zvipo zvakakosha uye chaiyo-nguva kuwanikwa. Izvo zvakare zvichave zvinogoneka kuita kuchengetedza.
Mhinduro yevashandisi kuchirongwa ichi inoramba ichionekwa asi, sezvatakambotaura pakutanga, ichi chikonzero chakanakisa chekutanga kushandisa Apple Mepu nguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Mepu ichapa ruzivo rwakadzama rwekupaka nekutenda kuParkopedia